Madaxweynaha Soomaaliya oo codsaday in la kaalmeeyo dadka ay abaarta saameysay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo codsaday in la kaalmeeyo dadka ay abaarta saameysay
November 14, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud. [Sawirka: Freya Ingrid Morales/Anadolu Agency/Getty Images]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ka dalbaday bulshada iyo beesha caalamka in ay biyo iyo raashin ku caawiyaan dadka ay saamaysay abaarta ee kunool dalka.
“Abaarta waxay ka jirtaa meel walba laakiin waxay si gaar ah ugu dhufutay waqooyiga-galbeed iyo waqooyiga-bari, Somaliland iyo Puntland, halkaas oo xoolo badan ay mar hore ku dhinteen, iyo dhowr qof” ayuu yiri madaxweyne Xasan Shiikh oo wareysi siiyay warbaahinta Bloomberg News.
Ku dhawaad 5 milyan oo Soomaali ah, ayaa wajahaya cuno iyo biyo yaraan ay keentay abaarta ka jirta dalka, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
November 22, 2016 Denmark oo maraakiibteeda kala baxaysa howlgalka la dagaalanka burcad-badeeda Soomaaliya ee biyaha Badweynta Hindiya